MAXAA KALA HAYSTA MASUULIYIINTA DAWLADA IYO SHAQAALAHA MUTADAWACNIMADA KU SHAQEEYA
Wednesday August 30, 2017 - 17:09:36 in Maqaallo by XA_Wararka Caynaba News
Qormadan maanta waxaan yara dul istaagi doona dhiiri gali la,aanta haysta da'yarta somalilaan iyo jalaafooyinka ay kala kulmaan xarumaha dawlada ee si geesimada leh ugu huraan
wakhtigooga iyaga oo mushahar ka qaadanahayn balse naawilaaya waacusub oo u soo baxa.
Wiilashan iyo gabdhahan waxay in mudo ah ku soo kalahaayeen xafiis dawladeed oo ay ku shaqaynayeen mutadawacnimo / lacag la,aan si ay rajadooda u rumeeyaan iyo hiigsigooga oo ahaa in ay shaqaale rasmi ah ka noqdaan xarumaha tacabka badan ay soo gasheen lakiin riyadoodi waxaa beeneeyey masuul aan lahayn xaqsoor iyo cadaalad kuna fikiraaya sidii inta jeebka ugu jirta iyo reerkiisa u keeni lahaa. Arinkani wuxu dhabar jabku yahay da'yartii ku soo dhiiran lahayd in ay dalkooga u huraan naftooda iyo maalkoogaba si ay uga qayb qaataan marxaladaha kala duwan ee dalku maraayo oo u baahan in dhalinta da'dayar ee wax soo baratay lagu kala saarilahaa qalinkooga si ay meesha uga baxdo hagardaamooyinka qarsoon ee masuuliyiintu ku hayaan dalka iyo dadkiisaba waana arin aad looga xumaado sii socodkiisu.
Geesta kale dhibta iyo niyad jabinta muwaadiniinta ay ku hayaan masuuliyiintu maaha mid lagu soo koobin karaayo hal iyo laba lakiin xaaladu waxay ka sii daraysaa maalinba maalinta ka danbaysa waxaanad arkaysaa dhaliinyar badan oo ka cabanaysa masuuliyiinta ugu sareeya xarumaha ay u soo samrayeen mudo badan. Hadaba kala saarista iyo kala qobqobku wuxu dhaliinyar badan ku kaliftay in ay dalka iskaga cararaan oo ay raadsadaan meel dhaanta meelihii hore ay ugu hongoobeen si ay nolol cusub u bilaabaan walaw mararka qaarkood dhib badan ay kala kulmaan duruufaha adag ee masuuliyiintaasi kula soo dhaqmeen halka qaarkood noloshaba ka dhacaan marka ay arkaan waxyaabaha ku dhacay kuwii ka horeeyey ee ay ahaayeen asaxaabta iyo qaraabada oo faaruqiyey goobihii ay ka naawilayeeen mustaqbal wanaagsan oo wax ugu taraan lafahooga. Arinkani maaha kii ugu horeeyey ee ay la kulmaan dhalinyar u hamuun qaba in ay xoogooga uga fa,iideeyaan dadkooga iyo dalkoogaba lakiin sartu waxay ka qudhuntay masuuliyad la,aanta inaga haysta in si cadaalad ah wax lagu qaybiyo muwaadiniinta u dhashay dalka oo dastuurku siinaayo in si siman oo mad,madaw ku jirin ay u heelaan waxay xaq u leeyihiin haba yaraadee lakiin tani waxay u baahantahay masuuliyiin ay dadku u simanyihiin.
Si kasta oo ay wax u jiraanba waxaa in badan dhaliinyartaasi is waydiisaa su,aalo badan oo ay ka mid yihiin:
Ø Goorma ayaa la heli doonaa la xisaabtan dhab ah?
Ø Masuulku ma qaranka ayuu matalaa mise reerkiisa?
Ø Maxaa keenay in nin jeclaysiga iyo qaraabo kiilku inagu bato?
Dhamaan su,aalahan iyo kuwa kale oo halkan lagu soo koobin karin ayaa ka dhex quuxaaya dhalinyarta dhibtan kala kulmay masuuliyiintoodii ay door bidaayeen in ay wax u qabtaan, si kastaba ha ahaatee waxaynu heli karnaa la xisaabtan dhab ah marka qarannimadu ka waynaato qabiilka oo masuulkasta la yimaado sinaan iyo cadaalad dhab ah. Waxaynu u baahanahay masuul u shaqeeya qaran lakiin u shaqaynin qooskiisa oo dantiisa iyo ta reerkiisaba ka hormariya danta guud ee qaranku leeyahay isaga oo muhiimada siinaaya in qarankan horumarkiisu ku jiro danta guud ee aanu ku jirin dan gaar ah. Hadaba baahidayaha badan iyo masuuliyad daradu waxay keentay qaraabo kiil iyo qof jeclaysi ku habsada dhamaan xarumaha aan lahayn hogaan adag oo ku taagan danta qaranka .
Guntii iyo gunaanadkii dalkani wuxu u baahanyahay masuul isku wada danyarta iyo inta wax haystaba si meesha looga saaro cadaalad darada ay tirsanayaan dhaliinyar wakhti badan galiyey qarankooga lakiin masuul aan hankiisu koobanyahay ku tacadiyey.
W/Q Ahmednuur Maxamuud Khaliif.